Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.3.1 fanehoana
Solontena dia ny fanaovana inferences avy amin'ny namaly ny lasibatra mponina.
Mba mahatakatra ny karazana fahadisoana izay mety hitranga rehefa avy namaly inferring ny mponina lehibe kokoa, dia aoka isika handinika ny asa soratra Digest mololo fitsapan-kevitra izay niezaka mialoha ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena 1936 US. Na dia ny 75 taona mahery lasa izay, dia mbola manana izany debacle lesona manan-danja hampianatra ny mpikaroka ankehitriny.
Literatiora Digest dia malaza liana general-gazety, ary nanomboka tamin'ny 1920 dia nanomboka nihazakazaka mololo fitsapan-kevitra mba mialoha ny vokatra ny fifidianana filoham-pirenena. Mba hahatonga ireo faminaniana izy ireo handefa vatom-pifidianana ho maro ny olona, ​​ary avy eo fotsiny Tally ny vatom-pifidianana izay niverina, kanto Digest tamim-pireharehana nitatitra fa ny vatom-pifidianana dia nandray dia tsy "mavesa, nanitsy, na adika." Izany fomba tsara mialoha ny mpandresy ny fifidianana tamin'ny 1920, 1924, 1928 ary 1932 tamin'ny 1936, teo afovoan'ny Lehibe Ketraka Lava, kanto Digest nandefa vatom-pifidianana ny 10 tapitrisa firenena izay manana anarana ny ankamaroan'ny tonga avy tany an-telefaonina sy ny fiara fisoratana anarana Directories firaketana an-tsoratra. Toy izao ny fomba namaritra ny fomba fiasan'ny:
"NY Digest ny malama-nihazakazaka milina moves ny haingam-pandeha fametrahana mazava tsara ny telo-polo taona 'traikefa mba hampihenana ny tombantombana ny mafy zava-misy. . . .This Herinandro 500 penina voarangotra bebe kokoa noho ny ampahefatry ny iray tapitrisa isan'andro adiresy. Isan'andro, tao amin'ny efitra lehibe ho ambonin'ny maotera-ribboned Fahaefatra Avenue, any New York, mpiasa 400 tapitrisa deftly solafaka ny zavatra vita pirinty sekely-ampy ny hanamboatra tanàna efa-polo sakana-ho any an-niteny manenika [sic]. Isaky ny ora, tao amin'ny The Digest NY Post Office manokana Substation, telo chattering metering mandefa milina voaisy tombo-kase dia nanorotoro ny fotsy oblongs; paositra mpiasa mahay navadibadiko azy ho eo an bulging mailsacks; andian-tsambo Digest kamiao nanafaingana azy ireo mba haneho Mail-fiarandalamby. . . Next herinandro, ny voalohany valiny avy amin'ireo folo tapitrisa no hanomboka ny Narahi-ranomasina ny miavaka vatom-pifidianana, mba ho telo-teny, voamarina, dimy heny hazo fijaliana-tsiambaratelo ka ampifanampiana. Raha ny tarehimarika farany, tsy nisy teny manokana voalaza totted ary, raha toa ka lasa traikefa no fepetra, ny firenena ho fantatry ny ao anatin'ny ampahany ny 1 isan-jato ny tena malaza fifidianana ny efa-polo tapitrisa [mpifidy]. "(Aogositra 22, 1936)
Ny Digest ny fetishization ny habeny dia fantatra avy hatrany ny misy "angona lehibe" mpikaroka ankehitriny. Ary tamin'ny 10 tapitrisa vatom-pifidianana nizara, mahagaga 2,4 tapitrisa vatom-pifidianana dia niverina-izany mitovitovy 1000 heny lehibe kokoa noho ny fitsapan-kevitra ara-politika ankehitriny. Avy 2.4 tapitrisa ireo namaly ny didim-pitsarana dia mazava: kanto Digest mialoha fa ny nihantsy ady Alf Landon nandeha mba handresy ny am-perinasa Franklin Roosevelt. Nefa, raha ny marina, ny tena mifanohitra amin'izany no nitranga. Roosevelt nandresy Landon amin'ny fihotsahan'ny tany. Ahoana no mety kanto Digest mandeha be maharatsy ny angon-drakitra? Ny fahatakarana ny santionany ankehitriny mahatonga ny fahadisoana kanto Digest mazava sy manampy antsika atao mba tsy hamerenana ny fahadisoana amin'ny ho avy.
Mieritreritra tsara momba ny santionany dia mitaky antsika mba handinika efatra samy hafa vondron'olona (Sary 3.1). Ny vondron'olona voalohany dia ny ampinga lehibe mponina; izao no vondrona izay mamaritra ny fikarohana toy ny mponina mahaliana. Amin'ny tranga literatiora Digest ny kendrena mponina mpifidy ao amin'ny fifidianana filoham-pirenena 1936. Taorian'ny fanapahan-kevitra amin'ny ho lasibatra mponina, mpikaroka mila manaraka ny hanana ny lisitry ny olona izay azo ampiasaina ho santionany. Io lisitra dia antsoina hoe ny santionany toetsika sy ny mponina eo amin'ny toe santionany dia antsoina hoe ny endriny mponina. Amin'ny tranga literatiora Digest ny endriny mponina ny 10 tapitrisa izay anarana tonga avy tany an-telefaonina ny ankamaroan'ny fiara Directories sy ny firaketana an-tsoratra fisoratana anarana. Ny tena tsara ny kendrena mponina sy ny endriny mponina ho mitovy, fa amin'ny fampiharana izany no matetika tsy ny raharaha. Fahasamihafana eo amin'ny mponina sy ny endriny kendrena mponina antsoina hoe mikasika ny fahadisoana. Fandrakofana fahadisoana tsy, mitokana manome antoka olana. Saingy, raha ny olona ao amin'ny endriny mponina dia amin'ny fomba tsy mitovy amin'ny olona eo amin'ny endriny mponina hisy mikasika ny fitongilanana. Fandrakofana fahadisoana no voalohany ny lesoka lehibe tamin'ny fitsapan-kevitra Digest ny asa soratra. Te hianatra momba ny mpifidy, izay ny tanjona mponina, fa nanorina ny santionany toetsika ankamaroan'ny olona avy any an-telefaonina Directories sy ny fiara Registries, loharanom-baovao fa maherin'ny-mifanitsy manankarena Amerikanina izay kokoa mba hanohanana Alf Landon (Tadidio fa roa ireo teknolojia, izay fahita amin'izao andro izao, dia mbola vaovao amin'ny fotoana sy ny US tao afovoan'ny Lehibe Ketraka Lava).
Figure 3.1: solontena fahadisoana.
Rehefa avy famaritana ny toe mponina, ny dingana manaraka dia ny mpikaroka mba hifidy ny santionany mponina; izao no olona izay ny mpikaroka dia hiezaka ny dinidinika. Raha ny santionany manana toetra samy hafa noho ny toe mponina, dia afaka mampiditra santionany fahadisoana. Izany no karazana fahadisoana quantified eo amin'ny sisin'ny ny fahadisoana izay matetika miaraka vinavina. Amin'ny raharaha ny asa soratra Digest nandamoka, dia raha ny marina tsy nisy santionany; dia niezaka mba hifandray ny olona rehetra tao amin'ny endriny mponina. Na dia tsy nisy santionany fahadisoana, mazava ho azy fa mbola nisy fahadisoana. Izany manazava fa ny sisin'ny ny fahadisoana izay matetika tatitra miaraka amin'ny vinavina avy amin'ny fanadihadiana dia matetika misleadingly kely; tsy ahitana loharanom-baovao rehetra ny diso.
Farany, mpikaroka miezaka mba hanadihady ny olona rehetra ao amin'ny santionany mponina. Ireo olona izay nahavita dinidinika dia antsoina hoe namaly. Ny tena tsara, ny santionana mponina sy ny namaly ho mitovy, fa amin'ny fampiharana misy tsy hamaly. Izany hoe, ny olona izay voafantina ao amin'ny santionany tsy mety handray anjara. Raha ny olona izay mamaly ny hafa noho ireo izay tsy mamaly, dia tsy mety ho valinteny tsy fitongilanana. Non-valinteny fitongilanana no olana lehibe faharoa tamin'ny fitsapan-kevitra Digest ny asa soratra. Ihany 24% ny olona izay nahazo ny vatom-pifidianana namaly, ary dia niova fa ny olona izay nanohana Landon dia azo inoana kokoa hamaly.
Ankoatra fotsiny ho ohatra mba hampidirana ny hevitra ny fisoloana tena, ny asa soratra Digest fitsapan-kevitra dia matetika-miverimberina fanoharana, cautioning mpikaroka momba ny loza ateraky ny santionany hiankina amin'ny kisendrasendra izany. Indrisy anefa, heveriko fa ny lesona fa olona maro manovo avy amin'io tantara io no misy manao sarotra. Ny tena mahazatra ara-pitondrantena ao amin'ny tantara dia ny hoe tsy afaka mianatra mpikaroka na inona na inona avy amin'ny tsy-mety santionany (izany hoe, santionany tsy henjana mety mifototra amin'ny fitsipika ho an'ny fifantenana ireo mpandray anjara). Saingy, araka ny mampiseho aho tatỳ aoriana ao amin'ity toko ity, izay tsy tena marina. Kosa, mihevitra aho fa misy tokoa ny fitondran-tena roa ity tantara ity; fitondran-tena izay toy ny tena amin'izao fotoana izao tahaka ny tamin'ny 1936. Voalohany, dia be dia be ny napetrapetraka nanangona antontan-kevitra dia tsy manome antoka tsara vinavina. Faharoa, ny mpikaroka mila ampamoaka ny fomba dia nanangona ny antontan-kevitra izy ireo, rehefa manao ny vinavinan'ny avy izany. Amin'ny teny hafa, satria ny fanangonana antontan'isa dingana ao ny asa soratra Digest fitsapan-kevitra tamin'ny fomba voalamina skewed amin'ny sasany namaly, ny mpikaroka Mila mampiasa kokoa tombany dingana sarotra fa ny vato sasany namaly mihoatra noho ny hafa. Taty aoriana ao amin'ity toko ity, hasehoko anao aho weighting iray toy izany fomba-post-stratification-izay afaka manampy anao mba ho tsara kokoa ny vinavinan'ny amin'ny tsy-mety santionany.